Panel P3.91 Hetsika ivelan'ny trano Rental LED Wall Panel
P3.91mm dia fampiroboroboana mahazatra miaraka amin'ny haben'ny kabinetra maro io. Ampiasaina amin'ny fahitalavitra, fampisehoana, fampisehoana entity, fivarotana lehibe, toeram-pivarotana fivarotana, lanonam-panambadiana ary fotoana hafa an-trano sy ivelany.
1.Tsy misy mpankafy mangatsiaka na A / C, tsy dia mihinana herinaratra.
2.Ny fanoherana ny rivotra dia kely, mety hanaparitaka ny hafanana noho ny elanelana kely.
3.Ny fitaovana dia Aluminium, maivana be loatra.
4.Mampiasa bracket / frame tsy dia kely loatra.
5.Mora ny fikojakojana,
6. namboarina manokana ho an'ny efijery lehibe habeny.
Ny Series Forwin vaovao an'ny EACHINLED dia manofa ny LED, rafitra fampisehoana natao manokana ho an'ny indostrian'ny fanofana. Misy fanavaozana lehibe eo amin'ny haitao, fitoniana tena tsara sy fikojakojana, vokatra hita maso tsara, teknolojia famolavolana endrika mirindra, ary endrika kanto. Mora apetraka ary esorina, miaraka amin'ny antsipiriany mihoatra ny 30 nohatsaraina, tonga lafatra amin'ny fanofana an-tsehatra, fihaonambe amin'ny horonantsary, fampirantiana avo lenta.
1) Volavola mahafinaritra: Ny hevitra famolavolana dia avy amin'ny sarobidy izay midika hoe mendri-kaja sy mahery.
2) Tsy misy tariby: tsy misy data na tariby mandeha amin'ny herinaratra ao amin'ireo modules. Samy ao anaty socket karazana pin. Ny famolavolana tsy misy tariby dia mahatonga ny fametrahana haingana, ny fikojakojana mora foana ary ny fandefasana angovo / angona azo antoka.
3) Fifandraisana angon-drakitra aorina: Ilaina amin'ny fampanofana ny fampitana data. Noho io antony io dia misy ny fampifandraisana angon-drakitra miverina. Raha vao misy ny olana tsy ampoizina dia azo afindra amin'ny back-up avy hatrany izy io.
4) Fanavaozana ny karatra fandraisana: karatra fandraisana NOVASTAR A5s EMC-Class B
5) Haben'ny kabinetra namboarina: Ho an'ny trano anatiny dia misy P2.97, P3.91 ary P4.81. Ho an'ny ivelany, P3.91 sy P4.81 dia misy.
6) Azo esorina ny efijery: azo atao miolikolika ihany koa izy, izay malaza indrindra amin'ny olan'ny fanofana, indrindra ny fampiharana an-tsehatra.
FORWIN Series Rental LED LED Specification
zavatra FORWIN Series FORWIN Series
Scan Mode 1/8 Scan 1/13 Scan
Pixe Per Sq.m 65.536 Pixel 43,264 Pixel
Haben'ny Module (W * H) 250 * 250mm
Haben'ny kabinetra (W * H * D) 500 * 500 * 75mm
Mizana volondavenona 14-16bits
Kabary lanja 8.2KG / Sombiny
Famirapiratana (Nits / ㎡) 5000-5500nits
Fiarovana IP IP65
TOSIKARAT miasa 100-240Volt (50-60hz) UL, mari-pahaizana CE
P3.9 Fanofana LED ao anaty trano ho an'ny Broadcast mivantana